काभेट इरोशन टेस्टि - - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
काभेटेशन कटाई सामग्री सतहहरूमा देखा पर्छ जुन प्रखर अल्ट्रासोनिक गुहा कभेटेशन इरोसन टेस्टिंग सामग्री वा कोटिंग्सको तीव्र तनाव र अन्य इरोसन कारकहरूमा प्रतिरोध प्रतिरोध मापन गर्न द्रुत विधि हो। यो गुणवत्ता नियन्त्रण को लागी एक सजिलो मात्रात्मक मापन प्रदान गर्दछ र सामग्री अनुसन्धान वा कोटिंग formulation को समयमा उपयोगी।
काभेट ईरोसन टेस्टि Use्ग किन प्रयोग गर्नुहुन्छ?
चलिरहेको इरोसन वा जंगलाई नियमित भागको प्रतिस्थापन वा सतह कोटिंग्सको नवीकरण आवश्यक पर्दछ। मेकानिकल वा रासायनिक प्रभावका कारण सामग्री सतहको क्षरण एक ढिलो प्रक्रिया हो जसको परिणामस्वरूप सामग्री सतहहरूको क्रमिक विनाश हुन्छ। तसर्थ, सामग्री क्षरण प्रतिरोध वा तरल पदार्थ र घोलको क्षरण प्रभाव को मूल्यांकन, एक धेरै समय उपभोक्ता प्रक्रिया हुन सक्छ।
अल्ट्रासोनिक काभेट ईरोसन परीक्षणले सामग्री सतहलाई नियन्त्रित, तीव्र, दोहोर्याउने तनाव चक्रहरूमा उजागर गर्दछ। यसले छोटो समयमा सामग्री सतहको महत्वपूर्ण क्षरणको परिणाम दिन्छ। उत्पादनमा नियमित गुणस्तर नियन्त्रण, आगमन सामग्रीको मूल्यांकनको लागि वा अनुसन्धान र विकासको बखत तपाईं द्रुतगतिमा इरोसन प्रतिरोध मापन गर्न सक्नुहुनेछ।
मानक अनुप्रयोगहरूमा धातु विज्ञान परीक्षण, कोटिंग फर्म्युलेसन टेस्टि co, कोटिंग अनुप्रयोग परीक्षण वा तरल पदार्थमा इरोसन इनहिबिटरहरूको मूल्यांकन समावेश छ।
UIP1000hdT (1000W, 20kHz) काभेट ईरोसन टेस्ट सेटअप
किन काभेटेशन कारण सतह क्षरण हुन्छ?
अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू, जस्तै UP400St (wat०० वाट, २kkHz) वा UIP1000hdT (१००० वाट, २०kHz) जोडी अल्ट्रासोनिक कम्पनहरू तरल पदार्थमा पानी जस्तै। तरलमा कम्पनको द्रुत पारस्परिक आन्दोलनले काभिएसन बबलहरू उत्पन्न गर्दछ र ध्वस्त पार्दछ। जब बुलबुले संक्षिप्त हुन्छन्, उच्च स्थानीयकृत मेकानिकल तनाव तरलमा र खुला सामग्री सतहहरूमा हुन्छ। १००० किमी / घन्टा सम्मको तरल जेटहरू र १००० एटीएमसम्म स्थानीय दबावले सामग्री सतहमा द्रुत थकान निम्त्याउँछ। यसले अक्साइड वा Passivation तह, कोटिंग्स वा fouling हटाउन सक्दछ। यसले स्टिल, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, प्लास्टिक वा गिलास जस्तो ठोस सामग्रीको पिटि .्ग गर्न सक्दछ। तसर्थ, cavitation क्षरण परीक्षण एक विनाशकारी परीक्षण विधि हो।
40mm टाइटेनियम सतहमा काभेट इरोसन
काभेटेशन इरोसन टेस्टि Howले कसरी काम गर्छ?
सामग्री सतहहरु को cavation कटाई बिस्तारै भौतिक हानि को कारण दिन्छ। तपाईं परिभाषित cavitation क्षरण जोखिम अघि र पछाडि सटीक मापनमा सामग्रीको तौल गरेर सजिलैसँग सामग्री हानि मापन गर्न सक्नुहुन्छ। काभेट ईरोसन टेस्टको लागि सामान्य वजन परिवर्तन १ र m०mg बीचको हुन्छ। थप मानकीकरणको लागि, तपाईले सामग्री घनत्व द्वारा वजन घटाएर विभाजन गरेर भोल्यूम घाटा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। औसत प्रवेश गहिराई (MDP) नमूना सतह क्षेत्र द्वारा भोल्यूम घाटा विभाजन गरेर गणना गरिन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ पिटि depth गहिराई वा विस्थापित भोल्युम मापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं ईरोसन पैटर्नको बारेमा अतिरिक्त गुणात्मक जानकारी प्राप्त गर्न माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाईं cavation क्षरण परीक्षणको लागि एक Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं तापक्रम दायरा र दबाव काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं काम गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं Sonication आयाम समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्यारामिटरहरू अनुगमित, प्रदर्शित र SD कार्डमा प्रोटोकोल्ड छन्। तपाईंलाई कुनै पनि स्वामित्व सफ्टवेयर स्थापनाको आवश्यक पर्दैन। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको नियमित वेब ब्राउजरबाट अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाइँ ईथरनेट केबल मार्फत अल्ट्रासोनिक उपकरण तपाइँको कम्प्युटरमा जडान गर्नुहुन्छ (समावेश गरिएको)।
टाइटेनियम सतहमा काभेट इरोसन
एक थरथरान उपकरणको प्रयोग गरेर काभेट एरोसनको लागि एएसटीएम G32 मानक विधि के हो?
ASTM G32-16 मानक cavation क्षरण को लागी एक मानकीकृत विधि वर्णन गर्दछ। यो एक सरल, नियंत्रणीय र प्रजनन परीक्षण परिभाषित गर्दछ विभिन्न मात्राको cavitation erosion प्रतिरोध मात्रा र तुलना गर्न। ATSM G32-16 विनिर्देशहरू अन्य प्रकाशनहरूको साथ तपाइँको परिणामहरूको तुलनाको लागि उपयोगी छ। यदि तपाईं क्वालिटेसन इरोसन परीक्षण क्वालिटी कन्ट्रोलमा लागू गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामी सिभेटेशन एरोसन टेस्ट प्रोटोकललाई तपाईंको विशेष आवश्यकताहरूको लागि अनुकूल बनाउन सिफारिस गर्छौं। हामी तपाईंलाई अनुकूलित काभेट ईरोसन टेस्ट प्रोटोकलको डिजाइनको साथ सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं। एएसटीएम-जी accordance२ को आधारमा काभेट ईरोसन परीक्षणको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
किन म एक समय सीमा को सट्टा एक ऊर्जा सीमा को उपयोग गर्नु पर्छ?
धेरै प्रकाशनहरू र एरोसन टेस्ट प्रोटोकलहरूले काभेट एक्सपोजर समय तोक्छ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूमा, तपाईं एक Sonication समय पूर्वसेट गर्न सक्नुहुन्छ र यो समय बितिसके पछि प्रणाली बन्द हुनेछ। तपाईं त्यसपछि mm / hr वा mm3 / hr मा नतीजा cavitation erosion दर गणना गर्न सक्नुहुन्छ। एक समय सीमा स्वीकार्य छ, मात्र यदि तपाईं कुनै प्यारामिटरहरू परिवर्तन गर्नुहुन्न, जस्तै तरल तह, आयाम, दबाब, तापमान, तरल संरचना वा Sonotrode र सामग्री सतह बीचको खाली। यदि यी प्यारामिटरहरू मध्ये कुनै परिवर्तन भयो भने सोनिकेशनको शक्ति र cavitation तीव्रता। यो महत्त्वपूर्ण छ, कि तरलमा पुर्‍याइएको वास्तविक शुद्ध शक्ति परीक्षणको अवधिमा अस्थिर हुनु हुँदैन।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूमा तपाईं एक ऊर्जा सीमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, अल्ट्रासोनिक उपकरण रोकिन्छ, यो निर्दिष्ट अल्ट्रासोनिक उर्जा पछि यो पछि। हिलस्चर उपकरण प्रदर्शन र रेकर्ड मापदण्डहरु, जस्तै वास्तविक शुद्ध शक्ति, आयाम, दबाव र तरल तापमान। उर्जा सीमा प्रयोग गर्दा शक्तिमा अस्थिरता वा प्यारामिटरहरूमा जानाजानी परिवर्तनहरू क्षतिपूर्ति दिइनेछ। तपाईं त्यसपछि एमएम / केडब्ल्यूएचआर, एमएम / / केडब्ल्यूएचआर वा मिलीग्राम / केडब्ल्यूएचआर मा नतीजा cavitation erosion दर निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं cavitation erosion अन्तराल बीच नमूना तौल, तपाईं संचयी उर्जा मा सीमान्त वजन घटाने (प्रत्येक ऊर्जा अंतराल मा वजन घटाउने दर) देखिएको घुमाव उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
अधिक सटीक परिणामहरूका लागि, उपकरण स्वचालित क्यालिब्रेसन (seconds० सेकेन्ड) प्रदर्शन गर्न सक्दछ। यो परिवेशीय दबाव मा हावा मा सबै आयाम सेटिंग को लागी उर्जा मापन गर्दछ। Hielscher उपकरण वास्तविक समय मा एकदम सटीक शुद्ध शक्ति मान दिन यो क्यालिब्रेसन डाटा प्रयोग गर्दछ।
काभेट ईरोसन टेस्ट नमूना (ASTM G32) – १))
ASTM G32 का लागि बदल्न सल्लाह – काभेट ईरोसन टेस्ट
काभेट ईरोसन टेस्टिंगका लागि उपलब्ध टेस्ट सेटअपहरू
हामी तपाईंको Erosion परीक्षण आवश्यकताहरु छलफल गर्न खुसी हुनेछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्न तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्! कृपया तपाईंको प्रोजेक्टको बारेमा अतिरिक्त जानकारी प्रदान गर्नुहोस्, जस्तै प्रति दिन परीक्षण गर्नका लागि नमूनाहरू, नमूना आकार र सामग्री।
UP400St मिसाइएको बेकरको साथ
प्रयोग गर्न सजिलो टेस्ट स्ट्यान्डका लागि हामी UP400St (400W, 24kHz) लाई एक Sonotrode S24d14D (१mm मिमी टिप व्यास) को साथ सिफारिस गर्दछौं। अन्य व्यास सोनोट्रोडहरू अवश्य पनि उपलब्ध छन्। यो शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक homogenizer, एक तापमान जांच र स्वचालित एसडी-कार्ड प्रोटोकलिंगको साथ आउँदछ। तपाईं UP400St S24d14D को साथ २० देखि mic 99 माइक्रोनको एम्प्लिट्युडमा अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी द्रुत कन्टेनर चिलि usingको साथ प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं, जहाँ तपाईं नमूना वा भाग सोनट्रोड टिपबाट परिभाषित दूरीमा राख्नुहुन्छ। UP400St उपकरण २ 24 घण्टा, हप्ताको days दिन निरन्तर पूर्ण शक्तिमा संचालन गर्न सक्दछ।
UP1000hdT चिसो परीक्षण सेलको साथ
एक Sonotrode BS4d22 (२२mm tip व्यास) को साथ Hielscher UIP1000hdT (1000W, 20kHz) अधिक शक्ति छ, उच्च आयाममा चल्न सक्छ र ठूलो नमूना प्रक्रिया गर्न सक्छ। एकाई एक तापमान जांच र स्वचालित SD-कार्ड प्रोटोकलिंगको साथ आउँदछ। बदल्न सकिने सुझावहरूको साथ ठूलो व्यास सोनोट्रोडहरू वा सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्। हामी तपाईंलाई आवश्यक सामानहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, जस्तै स्ट्यान्ड, हाइट समायोजन, एक शक्तिशाली कूलन्ट चिलर वा ज्याकेट टेक्स्ट जहाज तपाईंको नमूनाको लागि बढाउने कोष्ठकको साथ।
UIP2000hdT दबाव-तंग, चिसो परीक्षण कक्षको साथ
एक प्रेसराइज्ड तरल पदार्थमा काभेटेशन इरोसन टेस्टको लागि हामी सुझाव दिन्छौं UIP2000hdT (२००० वाट्स, २०kHz)। अन्य इकाइहरु जस्तै, यो एक तापमान जांच र स्वत: एसडी कार्ड प्रोटोकलिंग शामिल छ। वैकल्पिक डिजिटल प्रेशर सेन्सर PS7D एक धेरै रेकर्ड प्रेसर रेकर्ड गर्न उपयोगी छ।
सेवाको रूपमा काभेट ईरोसन टेस्टिंग
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्ससँग टेक्निकल सेन्टर छ जसले सेवाको रूपमा काभेट ईरोसन टेस्ट गर्न सक्छ। मानक नमूनाहरूको मशीनिंगबाट, परिशुद्धता तौल र काभेट एक्सपोजर नियन्त्रणमा र पुनरावृत्नीय अवस्था अन्तर्गत पूर्ण रिपोर्ट र तपाईंलाई नमूनाहरू फिर्ता गर्न, हिलस्चरले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न टेस्ट प्रोटोकल अनुकूलित गर्न सक्दछ।
केभेटेशन क्षतिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
अल्ट्रासोनिक cavitation परिणाम cavitation क्षरण मा। अल्ट्रासोनिक cavitation अधिक तीव्र, क्षति छिटो छ। अधिक तीव्र cavitation सामग्री सतहहरु ईरोड गर्न सक्छ, कि एक धेरै नरम cavation बिग्रेको गर्न सक्दैन। त्यसैले तपाईंको सामग्रीको क्षतिको परीक्षणको लागि न्यूनतम तीव्रता आवश्यक हुन सक्छ।
कम्पन आयाम sonication तीव्रता र नतीजा cavitation तीव्रताको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्यारामिटर हो। उच्च आयाम एक अधिक तीव्र cavation उत्पादन। अल्ट्रासोनिक्समा, आयामलाई माइक्रोनमा चोटी-शिखरको रूपमा निर्दिष्ट गरिन्छ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूले तपाईंलाई विशाल दायरामा आयाम समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। एक पटक समायोजित, उपकरण सबै लोड सर्तहरू अन्तर्गत समायोजित स्तरमा आयाम राख्दछ। यो नियन्त्रण गर्न योग्य र दोहोरिने योग्य cavitation परीक्षण सर्तहरू हुनु गर्न एक महत्त्वपूर्ण सुविधा हो।
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूले तपाईंलाई २ माइक्रोन देखि २०० माइक्रोन वा सो भन्दा बढीको अवधारणामा काभिटेशनल इरोसन परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ।
Sonication समयमा तरल दबाव
काभेट ईरोसन टेस्टिंगका लागि धेरै मानक प्रोटोकलहरू परिवेशीय दबावमा अल्ट्रासोनिक काभेट प्रयोग गर्दछन्। तरल दबाब Sonication तीव्रताको लागि दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। परिवेशीय दबावमा १०% वृद्धिले Sonication तीव्रता करीव १०% ले वृद्धि गर्दछ। अधिक तीव्र काभेटेशनले क्याभेटेशन इरोसनको एक निश्चित डिग्री प्राप्त गर्न आवश्यक समयलाई कम गर्दछ। प्राय: एकल नमूना परीक्षण कतै १ 15 देखि १२० मिनेट लिन सक्दछ। यदि तपाइँसँग परीक्षण गर्न धेरै नमूनाहरू छन् भने, उच्च दबावमा काम गर्दा प्रत्येक परीक्षणको लागि समय कम गर्न सक्दछ। Bar बार (ps 73psig) मा टेस्टको लागि करीव आवाश्यक हुन्छ। प्रत्येक परीक्षणको लागि %०% कम समय।
हिल्सचरले काभिएसन इरोसन टेस्टिंगको लागि डिजिटल प्रेशर सेन्सरको साथ प्रेशर-टाइट टेस्ट सेलहरू आपूर्ति गर्दछ। एक दबाव तंग सेल को उपयोग गरेर, तपाईं नियन्त्रण र प्रत्येक परीक्षणको दौरान दबाव कायम गर्न सक्नुहुन्छ। अल्ट्रासोनिक जेनेरेटर प्रेसर सेन्सर निरन्तर निगरानी गर्दछ र एक एसडी कार्ड (समावेश) मा एक Excel- अनुकूल CSV- फाईल को वास्तविक दबाव प्रोटोकल। हिल्सचरले अपरेटिंग प्रेशर सेट गर्न र मेन्टेन गर्न प्रेशर रेगुलेटरहरू आपूर्ति गर्दछ।
एक मानक हिल्सचर प्रेशर-कस परीक्षण कक्षहरू cavation इरोशन परीक्षणको लागि अप tp 5barg (ps 73psig) को लागि मूल्या are्कन गरिएको छ। अनुरोधमा bar००बारब (50 43ps०psig) को उच्च दबावहरू उपलब्ध छन्।
सामान्यतया, काभेट इरोसन टेस्टि lowले कम आवृत्ति उच्च तीव्रता अल्ट्रासोनिक्स १ uses--30० केएचझेड दायरामा प्रयोग गर्दछ। यस दायरामा फ्रिक्वेन्सी को भिन्नता cavation तीव्रता मा धेरै सीमित प्रभाव छ। सबै Hielscher उपकरणहरू स्थिर आवृत्ति मा काम गर्दछ।
काभेट एरोसन टेस्टिंगको लागि उचाइ-समायोज्य परीक्षण कक्ष (ASTM G32-16)
Sonotrode बाट दूरी
सामग्री परीक्षण गर्न को लागी Sonotrode मा वा Sonotrode अन्तर्गत माउन्ट गर्न सकिन्छ। तपाईं थ्रेड गरिएको सामग्री नमूना बनाउन र अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडको अन्त्यमा माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, नमूना निर्दिष्ट अल्ट्रासोनिक आयाममा कम्पन हुन्छ र यसको सतहमा cavitation उत्पादन गर्दछ। यसको लागि सटीक मेशिन आवश्यक छ र सबै सामग्रीहरू यस विकल्पका लागि उपयुक्त छैनन्।
वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ टायटानियम सोनोट्रोड अन्तर्गत निकटतम एक अंश वा नमूना मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, टायटानियम सोनोट्रोडले काभेट उत्पादन गर्दछ र सामग्री सतह गुहालाई प्रकाश पार्दछ। यो अधिक सुविधाजनक विकल्प हो किनकि तपाईं परीक्षण कक्षमा विभिन्न आकार वा आकारहरूको नमूना राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले ठूलो सोनोट्रोड प्रयोग गर्नुहुन्छ, जस्तै 50० मीमी वा 80० मिमी व्यासको सोनोत्रोड, तपाई एकै समयमा धेरै भागहरू काभेट एरोसनमा पर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै उपयोगी छ जब तपाईं प्रति दिन धेरै भागहरू परीक्षण गर्नुपर्दछ, जस्तै गुणवत्ता नियन्त्रणको लागि।
दुबै केसहरूमा अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोड र यसको छेउछाउको सामग्री सतह बीचको दूरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया, cavitation erosion छोटो दूरी को उपयोग गर्दा छिटो हुन्छ। विशिष्ट दूरी ०.२ देखि १mm मिमी सम्म। निर्णायक परिणामहरूका लागि तपाईले सबै परीक्षाको लागि समान दूरी प्रयोग गर्नुपर्दछ।
तातो तरल एक कम अल्ट्रासोनिक cavitation तीव्रता मा परिणाम। तरलमा मेकानिकल कम्पन उर्जाको इनपुटले तरललाई तातो पार्नेछ। प्रत्येक काभेट इरोसन टेस्टको दौरान स्थिर तापक्रम कायम गर्न, तरल चिसो हुन आवश्यक छ। हिल्सचरले ज्याकेट गरिएको कन्टेनरहरू र ज्याकेट गरिएको प्रेशर-टाइट सेलहरू आपूर्ति गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा तपाई बीकरमा कूलि। कुण्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा बेकरलाई आइस-बाथमा राख्न सक्नुहुन्छ। शीतलक जुन ज्याकेट मार्फत वा कूलि co कुण्डलको माध्यमबाट चल्छ तरलबाट तातो हटाउँदछ।
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू, जस्तै UP400St वा UIP1000hdT एक PT100 तापमान जांचको साथ आउँदछ (समावेश गरिएको)। अल्ट्रासोनिक जेनेरेटरले वास्तविक तरल तापक्रम निरन्तर अनुगमन गर्दछ र तापमानलाई एसडी कार्डमा समावेश गरिएको एक्सेल-मिल्दोजुल्दो CSV- फाईलमा प्रोटोकल गर्दछ। तपाईं जेभरेटर सेट गर्न सक्नुहुन्छ क्याभिटेशन इरोसन टेक्स्ट पज गर्न तरल तापक्रमले तपाईंको सेट-पोइन्टबाट ज्यादै धेरै विचलन गर्दछ, उदाहरणका लागि अपर्याप्त शीतलक क्षमताको कारण। तरलले निर्दिष्ट तापमानमा फेरि पुग्दा स्वचालित रूपमा जेनरेटरले Sonication पुनःसुरु गर्न सक्दछ।
सामान्य काभेट इरोसन टेस्टि waterमा पानी प्रयोग गरिन्छ, जस्तै आसुत पानी। बिभिन्न तरल पदार्थहरूले विभिन्न cavitation विशेषताहरू देखाउँदछ। यदि पानी तपाईंको सामग्रीमा संक्षारक छ भने, तपाईं वैकल्पिक तरल पदार्थहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, कम विस्कोसिटी सिलिकॉन तेल वा जैविक घोलकहरू संक्षिप्त कारकलाई कम गर्न वा कम गर्नको लागि। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं तरललाई अधिक संक्षारक बनाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि pH परिवर्तन गरेर वा घर्षण कणहरू थपेर बढी घर्षण गर्नुहोस्। तपाईं काभेट एरोसन टेस्टिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तरलहरूको इरोसिनेस र संक्षिप्तता, जस्तै ड्रिलिंग मैड्स वा क्षय वा क्षरण अवरोधकहरूको प्रभावकारिताको मूल्या .्कन गर्न।
जब तपाईं एक हिस्सा वा नमूना उत्पादन गर्नुहुन्छ, सीएनसी मेशिन, ग्राइन्डिंग वा पॉलिश गर्दा सामग्री सतहको नजिक धानको संरचनामा क्षति हुन्छ। यसले इरोसन प्रतिरोधलाई कम गर्दछ।
Passivation / अक्साइड परतहरू
धेरै पटक क्षरण र क्षति एकै समयमा हुन्छन्। पानी, जस्तै आसुत, demineralized वा डी-ionized पानी धेरै सामग्रीमा संक्षारक हुन सक्छ। अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले क्षरणलाई बढावा दिन्छ। Passivation तहहरू, उदाहरणका लागि anodized एल्युमिनियम एक सामग्री सतह को क्षति र क्षति को प्रतिरोध वृद्धि हुनेछ।
काभेटेशन इरोसन टेस्टि Whatका कुन सीमाहरू छन्?
केहि ईलिस्टोमर्सलाई कुनै पनि उत्प्रेरणाको क्षरण देखाउन धेरै गम्भिर काभेट एक्सपोजरको आवश्यकता पर्दछ। यस अवस्थामा, एक दबाव सेल बिना Sonication कुनै मापन प्रभाव देखाउन सक्दैन।
ASTM G32 -16 15.9mm Sonotrode प्रतिस्थापन टिप संग
कवरेज ईरिकेशन परीक्षण (ASTM G32-92)
काभेट ईरोसन टेस्टिंगका लागि टेम्पलेट टेस्ट प्रोटोकल
तपाईं निम्न ढाँचाहरूमा हाम्रो टेम्पलेट कार्यपत्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ: पीडीएफ, Microsoft Excel XLS, वा एप्पल संख्या।
काभेट ईरोसन टेस्टिंगका लागि नमूना वर्कशीट